सर्यो ’सुश्री सम्पति’ को प्रदर्शन मिति, अर्को प्रदशर्न मिति कहिले ? – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentसर्यो ’सुश्री सम्पति’ को प्रदर्शन मिति, अर्को प्रदशर्न मिति कहिले ?
फिल्म ’सुश्री सम्पति’ मङ्सिर २८ मा रिलिज हुने भएको छ । भाद्र २२ मा रिलिज गर्ने सोच अनुसार पोस्ट प्रोडक्सनको कामलाई अगाडी बढाएता पनि केहि प्राविधिक कारणले गर्दा फिल्मले रिलिज डेटलाई अगाडी सारेको छ । केहि समय अगाडी मात्र ’हुकुम’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेको निर्माण टिमले रिलिज डेट केहि दिनमा घोषणा गर्ने बताएको थियो । रङ्ग पत्रकार सुव्रत आचार्यको निर्देशनमा तयार भएको फिल्ममा सलोन बस्नेत , सारा सिर्पाली र बिनोद न्यौपाने मुख्य भूमिकामा छन् । रमेश त्वायना प्रस्तुतकर्ता रहेको ‘सुश्री सम्पत्ति’ को कथा निर्देशक सुव्रत आफैले लेखेका हुन् । फिल्मको निर्मातामा विज्ञान राई, नुनम सुब्बा र रमन सिलाकार रहेका छन् । फिल्ममा प्रमोद अग्रहरी, राजाराम पौडेल, विशारद बस्नेत, सुनिता श्रेष्ठ ठकुरी लगायतका कलाकारहरुको पनि अभिनय रहेकोछ भने यसमा प्रियंका कार्की पनि अतिथि भूमिकामा देखिनेछिन् । अभिमन्यू निरवी र निर्देशक आचार्यको डाइलग रहेको फिल्मको स्क्रिनप्ले अभिमन्यूकै रहेको छ । फिल्मलाई उपत्यकामा बिके फिल्मसका गोपालकाजी कायस्थ र मोफसलमा एफडी कम्पनीले वितरण गर्नेछ । फिल्मलाई भरत रेग्मीले सम्पादन गरिरहेका छन् ।
सुव्रत आचार्यः फिल्म ’सुश्री सम्पति’ मेरो निर्देशनमा तयार भएको दोस्रो फिल्म हो । डेब्यु फिल्म ’अधकट्टी’ बाट मैले सिकेको अनुभवलाई पनि यसमा प्रयोग गरेको छु । फिल्म बन्न सबैको मेहनत उत्तिकै हुन्छ , यसैले गर्दा पनि एउटा फिल्मको सफलतासँग धेरै जोडिएका हुन्छन । हामीले भाद्र २२ लाई वितरकहरुसँग कै सल्लाह अनुसार नै रिलिज मिति तय गरेका थियौ । तर केहि प्राविधिक काम पनि पुरा नभएको र वितरकसँगकै आपसी छलफलका कारण हामीले नयाँ रिलिज डेट मङ्सिर २८ लाई तय गरेका छौ । हामीले यो समयमा फिल्मको पोष्ट प्रोडक्सनको सम्पूर्णकाम राम्रोसँग सकाउछौ भने पब्लिसिटीमा पनि राम्रोसँग ध्यान दिन पाउछौ । यहि कारणले गर्दा हामीले ’सुश्री सम्पति’ को रिलिज डेट मङ्सिर २८ लाई तय गरेका हौ ।